3 isebenza ukukhumbula ukuqala kweMpi Enkulu | Izincwadi Zamanje
3 isebenza ukukhumbula iMpi Enkulu
UJoaquin Garcia | | Imicimbi, I-Novela, eziningana
Ngo-2014 kuyakhunjulwa ikhulu leminyaka lokuqala kweMpi Enkulu, igama elizoshintsha kamuva ngenxa yeMpi Yezwe I, njengoba yaziwa njengamanje. Lesi simo sempi asilimazanga nje kuphela i-europe yakudala kodwa futhi nasemhlabeni wonke, kube yimpi yokuqala emhlabeni wonke kanye nezinhlekelele nokulahleka okukhulu. Ngalesi sizathu, ngicabanga ukuthi kulula, okungenani ngosuku lwayo lokuzalwa, ukukhumbula izinto ezishaqisayo ukuze ungaphinde uwele kubo. Futhi iyiphi indlela engcono yokukhumbula okuthile kunokufunda mayelana nesikhathi. Ungakhathazeki Angilethi zincwadi zomlando noma kunjalo abanye ababhali uma bephila futhi bahlupheka iMpi Enkulu, ngakho-ke izincazelo zabo, imibono yabo uma bethembekile eqinisweni.
Siqala impelasonto, impelasonto yasehlobo ngakho-ke yisikhathi esihle sokufunda okuthile ngeMpi Enkulu, ngakho-ke ngikulethela imisebenzi emithathu mayelana nempi eyenzeka eminyakeni eyikhulu nokuthi singayithola ngentengo ephansi kakhulu, ngoba yimisebenzi yakudala, okungenani emibili yayo futhi inayo ne-pocket edition.
1 Ukuwa Kweziqhwaga nguKen Follet
2 Azikho Izindaba Phambi kuka-Erich Maria Remarque
3 Ingxenye Yezempi ka-Edlef Köppen
4 Isiphetho ezincwadini zeMpi Enkulu
Ukuwa Kweziqhwaga nguKen Follet
Ukuwa kwemidondoshiya nguKen Follet kungumsebenzi wokuqala ku-Trilogy ophela kulo nyaka. Le trilogy izolandisa ngemicimbi ebalulekile kusukela eminyakeni ngaphambi kweMpi Yezwe Yokuqala kuze kube ukuwa koDonga lwaseBerlin. Kulo msebenzi, uFollet ulandisa ngempilo yabalingiswa abahlukahlukene abathi ngandlela thile babambe iqhaza ekwakheni iMpi Enkulu. Ukuwa kwemidondoshiya Isinikeza umbono ohlukile weMpi Enkulu eyayikhona kuze kube manje. Abasakhulumi ngesosha elincane kepha bakhuluma ngobuqili bezenxusa, umyalo ophakeme kanye nesikhathi somlando. Futhi konke okunongwe nge- ubuhlakani bukaKen Follet, ngakho-ke kungomunye wemisebenzi esikholelwe ukuthi kufanele.
Azikho Izindaba Phambi kuka-Erich Maria Remarque
Azikho izindaba ngaphambili kuwumsebenzi wombhali waseJalimane u-Erich Maria Remarque. Yashicilelwa ngo-1939 futhi ngaphambi kokuphela konyaka, le noveli yayivele ihunyushelwe ezilimini ezingama-26. Azikho izindaba ngaphambili Imayelana nendaba yamasosha amathathu amancane okuthi, ngemuva kokuqeda isikole esiphakeme, ajoyine umbutho wezempi ukuyolwa eMpini Enkulu. Ekuqaleni, uPaul Baümer, umphathi walo omkhulu, usitshela ukuthi impilo ebuthweni yayicishe ibe yinto engathandeki, ukuphela kwento ababekhala ngayo ukungabi nokulala okuhle. Kepha kancane kancane bathola izinto ezesabekayo zempi, ukuqala konke ngokuvakashela umngani wabo esibhedlela, lapho behamba khona ebusuku bebona osebenza naye osemncane beya kumuntu othukile ogcina ngokushonela esibhedlela. Kancane kancane uRemarque ulandisa ngokushaqisayo kwempi ngemilomo yalaba bantu abasha abathola ukuthi imfundo yabo yonke esikoleni ayisiyilutho ngaphandle kwenganekwane eduze kwalokhu ababhekene nakho.
Ingxenye Yezempi ka-Edlef Köppen
U-Edlef Köppen wayengomunye wababhali abakwazile ukuqala nokuqeda iMpi Enkulu. Lapho kuqala iMpi Enkulu, uKöppen wayengumfundi osemncane weFilosofi kanye nezincwadi ezabona ukuthi umsebenzi wakhe wokufunda uphazanyiswa yimpi yempi. Vuliwe Iqembu Lempi, UKöppen usitshela ngomuntu osemusha waseJalimane othola izinto ezesabekayo zempi. Okungajwayelekile ngesimilo sikaKöppen ukuthi le nsizwa ingena nomqondo wokuthi iyisosha, ingomunye wamavolontiya lapho impi iqala futhi kancane kancane uthola ukuthi wayedideke kanjani ngempela futhi wayithola ngendlela embi kakhulu .
Isiphetho ezincwadini zeMpi Enkulu
Njengoba ukwazi ukubona, cishe yimisebenzi yomlando ekhombisa iqiniso: ukwesaba kwempi. Uma uthanda izincwadi zempi, uzothanda noma iyiphi yale misebenzi, kepha lolu hlobo lwezincwadi ludonsela ukunaka kwakho, mhlawumbe into enengqondo kungaba ukufunda umsebenzi kaFollet, kepha noma yikuphi kokunye okubili, uzokuthanda, hhayi okwakhe kuphela impikiswano kodwa nangendlela yakhe yokuxoxa izindaba. Ngakho-ke jabulela ngempelasonto.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Imicimbi » 3 isebenza ukukhumbula iMpi Enkulu
Sekuvele kunabanqobile kuHarvey 2014
Ngabe ubhalisela noma iyiphi yale mincintiswano yokubhala?